Jose Mourinho: “Ugu dambantii Pogba waa yimid” – Gool FM
Jose Mourinho: “Ugu dambantii Pogba waa yimid”
Haaruun August 8, 2016
(Manchester) 08 Agoosto 2016 – Maareeyaha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa soo dhaweeyey Paul Pogba, waxaana uu xaqiijiyey in ugu dambeyn ay isaga gacanta ku dhigeen.
Waxaa shalay la xaqiijiyey in laacibka khadka dhexe ee Juventus uu tijaabada caafimaad u mari doono Red Devils si uu u dhammaystiro heshiiskiisa rikoodhka Adduunka ah oo uu ugu biirayo Man United.
“Waa heshiis dhacay, waxaan u malaynayaa inay sidaas tahay ugu dambayntii,” Mourinho ayaa sidaas ku sheegay shirkiisa Jaraa’id kaddib markii ay koobka Community Shield ka qaadeen kooxda Leicester City.
“Waa cajiib ciyaaryahan wanaagsan ayaa nala jira, ugu dambayntii waan helnay isaga, waxa uu yimid dhanka guusha, koox ku guuleysatay labadii kulan ee ugu dambeeyey FA Cup iyo Charity Shield.
“Waa inuu si adag u shaqeeyaa haddii uu yimaado kooxda, waxaan helay warbixinta kulanka ka hor, mahaysanin waqti aan kaga fikiro oo ku saabsan, haddii uu yimaado halkaan ka hor bilaabashada Premier League, waxaan siin doonnaa waqti uu ku shaqeeyo, taasna waa wanaagsan tahay.”
Arsenal oo ka war sugeysa heerka uu le'egyahay dhaawaca GabriePaulista
Mourinho: "Pogba waa in uu shaqo adag qabtaa si uu kooxda kowaad u galo".